महिलाले किन रोज्छन् पाको पुरुष सेक्सको लागी ? जानुहोस् तथ्य - Online Palanchok
पुरुष चाहे त्यो १८ वर्षको होस् वा ३० वर्षको अथवा सो भन्दा माथिको । सबै उमेर समूहका पुरुषको रोजाइमा २०–२५ वर्षे उमेरका युवती पर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
फिनल्याण्डमा १८ देखि ४९ वर्ष उमेरका मानिसहरुमा गरिएको अध्ययनले २०–२५ वर्षे उमेरकी युवतीप्रति पुरुषहरु सबैभन्दा बढि आकषिर्त हुने गरेको पाइएको छ । सँग सहवासका लागि सबैभन्दा धेरै इच्छा जाग्ने बताएको पको इच्छा व्यक्त गरेको पाइयो ।
तर पुरुषहरुमा भने महिलाप्रतिको आकर्षणका सन्दर्भमा उमेरमा एकरुपमा पाइयो । अध्ययनमा सहभागी सबै उमेर समूहका पुरुषहरुले २०–२५ वर्षे उमेरका महिलालाई रोजाइमा पारेको देखिएको छ ।
Posted in रोचक बिचित्र, समाचार
Prevसारेगमपबाट किन अाउट भइन गायिका मेनुका पौडेल ? यस्तो छ खास कारण(भिडियो सहित)
Nextबिहानै यस्तो सपना देख्नु भयो भने सुखै-सुख मिल्ने !